Shanduro Yekushandisira Kugadziridza: 9-Nhanho Nongedzo Kuwedzero Yekutendeuka Mitengo | Martech Zone
Sevashambadziri, isu tinowanzo kushandisa nguva kugadzira mishandirapamwe mitsva, asi isu hatiwanzo kuita basa rakanaka tichitarisa mugirazi kuyedza kukwidziridza edu ekushambadzira uye maitiro online. Zvimwe zveizvi zvinogona kungoita kunge zvinorema… unotangira kupi? Pane nzira here yekushandura mwero wekugadzirisa (CRO)? Zvakanaka hongu… zviripo.
Ithimba iri Shanduko Yehunyanzvi Nyanzvi ine yavo CRE Methodology iyo yavanogoverana mairi iyi infographic vakaisa pamwechete nechikwata kuKISSmetrics. Iyo infographic ruzivo 9 matanho ekuti nani shanduko mitengo.
Matanho Ekumisikidza Mitero Yekutendeuka
Sarudza Iyo Mitemo Yemutambo - gadzira yako CRO zano, zvinangwa zvenguva refu, uye maitiro aungaita kubudirira. Tanga nevashanyi vako mupfungwa uye famba nhanho imwe neimwe yavanofanira kutora kuti vachinje kumutengi. Usaite zvekufungidzira!
Nzwisisa Uye Tune Aripo Magwagwa Source - gadzira shiri-ziso rinotarisa rako redhijitari zvivakwa uye fungidzira yako sales salesnel, uko vashanyi vari kubva, ndeapi mapeji anomhara avanosvika, uye mafambiro avari kuita saiti yako. Ziva nzvimbo dzine mukana mukuru wekuvandudza.
Nzwisisa Vako Vashanyi (kunyanya vasina-kutendeuka) - Usafungidzira - tsvaga kuti sei vashanyi vako vasiri kutendeuka nekunzwisisa dzakasiyana mhando dzevashanyi uye zvinangwa, zvichiratidza mushandisi ruzivo nyaya, uye kuunganidza nekunzwisisa zvinoshorwa nevashanyi.
Funda Wako Musika - Dzidza vakwikwidzi vako, vakwikwidzi vako, nyanzvi yemabhizimusi, uye zviri kutaurwa nevatengi vako pane vezvenhau uye pamasaiti ekuongorora. Wobva watsvaga mikana yekuvandudza nzvimbo yako nekuvaka simba rekambani yako.
Fumura Hupfumi Hwakavanzwa Mubhizinesi Rako - Ziva kuti ndezvipi zvinhu zvekambani yako zvinonyanya kukurudzira kune vangangove vatengi, ratidza izvo zviwanikwa panguva yakakodzera mukutenga, uye shandisa nguva kuwana, kuunganidza, uye kuratidza izvo zvinhu.
Gadzira Yako Yero Yekuongorora - Tora ese mazano awakagadzira kubva kutsvagurudzo yako woisa pekutanga iwo makuru, akashinga, akanangwa ayo anozokura bhizinesi rako munguva ipfupi. Shanduko dzakashinga dzinokupa imwe purofiti, uye unowana kukurumidza kudzoka kwakakura.
Dhizaina Yako Yekuongorora Mapeji - Dhizaini uye wayaframe yeiyo nyowani mushandisi ruzivo iyo inonyengetedza, inotendwa, uye inoshandisa mushandisi. Ita bvunzo dzinoverengeka dzekushandisa pane iyo tambo uye uzvikurukure nechero munhu ane nzwisiso yevatengi vako.
Ita Zviitiko PaWebhusaiti Yako - Ita A / B bvunzo pane zvako zviedzwa. Tevedza maitiro anovimbisa kuti vese nhengo dzechikwata vanonzwisisa kuti bvunzo chii, nei uchimhanya, kuti zvinokwana sei saiti, kuti inowirirana sei nezvinangwa zvebhizinesi, uye maitiro aunoyera kubudirira. A / B yekuyedza software inogona kuverenga, ine huwandu hwehuwandu, iyo vhezheni iri kugadzira kumwe kutendeuka.
Chinjana Mishandirapamwe Yako Inokunda Uchipinda Mune Mamwe Midhiya - Ongorora kuti ruzivo kubva mukuedza kwako kuhwina runogona kuitiswa sei mune zvimwe zvikamu zvekushambadzira kwako fanera! Misoro yenyaya inogona kugoverwa, kukunda paInternet kunogona kuchinjirwa kune vekunze vezvenhau, uye nekuparadzira izwi kune vako vanobatana kuti vagone kukwidziridza nhimbe dzavo.
Kissmetrics inogonesa vashambadzi kuita Vatengi Engagement Automation (CEA) nekuvabatsira kuongorora, chikamu, uye kuita zvese munzvimbo imwechete nemirau iri nyore kuverenga uye neushamwari mushandisi mushandisi.
Kumbira Demo reKissmetrics
Tags: kutendeuka optimizationshanduko yemahara nyanzvichiyero chekushandura optimizationdanho rekushandura matanho ekugadzirisashanduko yekuwedzera optimization zanonzira yekugadziracrocro zanomhete
SEO Buddy: Yako SEO Yekutarisa Uye MaGwara Ekuwedzera Yako Organic Chinzvimbo Kuonekwa
Dhiraivha Zvakawanda Zvinotungamira NeLandingi's Landing Peji Yakavaka iyo WordPress
Apr 17, 2021 pa 3: 23 AM
Great post! Iyo iri pamusoro-nhanho-nhanho nhanho dzinofanirwa kukupa iwe hwaro hwekumisikidza chinhu chimwe nechimwe chepeji yekumhara, zvichitungamira mukuvandudzika shanduko.